ငါးမျိုးစိတ် : fishbase.org | fishbase.us | fishbase.de | fishbase.se | fishbase.tw | 中国镜像 | fishbase.ca
(33900 မျိုးစိတ်များ, 323100 အများခေါ်အမည်, 58600 ဓါတ်ပုံများ,
54700 ကျမ်းကိုးစာရင်း, 2300 သတင်းအချက်အလက် ကောက်ယူသူ, 700000 Visits/Month)
မှုလနေထိုင်ရာဒေသ | FishBase စာအုပ် | အကောင်းဆုံးဓါတ်ပုံ |	သဲလွန်စများ | ဧည့်သည်မှတ်တမ်း | ကူးယူရရ်ှိနိုင်ပါသည် | ဆက်နွယ်မှုများရှိသည် | ငါးအကြောင်းကို စုဝေးပြောဆိုခြင်း | ငါးများ၏ပါဟေဠိ |
FishWatcher | ငါးများ၏အကြောင်းအရာများကိုသာ ရေးသားထားသော သင်ခန်းစာ| LarvalBase | အဖွဲ့ | သတင်းအချက်အလက် ကောက်ယူသူ | မျိုးခွဲခြားခြင်း | Services
ပါဝင်သည်အတူအစပြုအဆုံးနှင့်အတူရှိသည်။ဖြစ်သည်။ (e.g. rainbow trout)
ရှိသည်။ဖြစ်သည်။ပါဝင်သည်အတူအစပြုအဆုံးနှင့်အတူ (e.g. Rhincodon)
ရှိသည်။ဖြစ်သည်။ပါဝင်သည်အတူအစပြုအဆုံးနှင့်အတူ (e.g. typus) Random Species
မျိုးစဉ် + မျိုးစိတ်များ
မျိုးရင်းအားဖြင့် ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ
မှတ်စု ။ စာရင်းများပြည့်စုံနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အချို့စာရင်းများသည်အလွန်ရှည်နေမည်ဆိုလျှင် အချက်အလက်များကို ရယူချိန်ကြာမြင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ အစည်း၏ ရေသတ္တ၀ါမွေးမြူရေးကဏ္ဍ
ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ အစည်း၏ ဖမ်းဆီးရရှိမှုစာရင်းများ
ကွင်းဆင်းရာတွင် အသုံးဝင်သော လမ်းညွှန်စာအုပ်
ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ အစည်း၏ ဖော်ပြချက်
သန္တာကျောက်တန်းတွင်နေထိုင်သော ငါးမျိုးစိတ်များ၏သတင်းအချက်အလက်များကို အခြေခံ၍
အများပြည်သူများအပန်းဖြေရန် ဆောက်လုပ်ပေးထားသော ငါးပြတိုက်
ဂေဟစနစ်အားဖြင့် ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ
အစာရရှိမှုကွင်းဆက်နှင့် အစာစားသောအလေ့အကျင့်ကို အဆင့်ဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
အစာရရှိမှုကွင်းဆက်နှင့် အစာစားသောအလေ့အကျင့်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆက်စပ်မှု
ကမ္မဗေဒ / အပြုအမှု
သားလောင်းများတည်ရှိမှု၊ရွှေ့ရှား ပြောင်းလဲမှု၊ကြီးထွားမှု၊ သေဆုံးမှုများ
သန့်ရှင်းမှုမရှိသော ပင်လယ်ငါးကို စားမိ အဆိပ်မိခြင်း
ဂေဟစနစ်ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော အကြောင်းအရာများကို လေ့လာသောဘာသာရပ်
ဆင်းသက်လာသော မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ကို လေ့လာထားချက်
မျိုးစိတ်အသစ် in FishBase
မျိုးစိတ်အသစ် in Welt der Fische
ငါးများအကြောင်းကို ရေးသားထားသော မဂ္ဂဇင်းICES papers
FishBase မှထုတ်ပြန်ထားသော ကျမ်းကိုးစာရင်းများ
မှုလစာရေးသူအမည်ကို ပေးပို့ပေးပါ။ FishBase စာမျက်နှာပေါ်တွင် ရေးသားထားသော အချက်အလက်များကို ရယူမည်ဆိုလျှင်လည်း မိမိအသုံးပြုခဲ့သော အဓိကကျသော ကျမ်းကိုးစာရင်းနှင့် ကျမ်းကိုးစာရင်းမှ ရရှိထားသော အချက်အလက်များကို မှတ်သားထားပါ။
ငါးများ၏အချက်အလက်များကိုတင်သွင်းဖော်ပြထားသော အင်တာနက်စာမျက်နှာ၏ ကိုးကားချက်
www.fishbase.org, version (02/2018).
FishBase mirror: UBC - Canada
update ver. 02/2018